मास्टरको सपना | Hamro Patro
राती बिस्तरामा बाबुको दुबै हातको सिरानी नहाली दुबै छोराछोरी निदाउँदैनन् । दिनभर कामले थाकेकी मास्टर्नी पनि हिउँदको यो सालीन मौसममा आफ्ना पतिको छातीमा हात राखी निदाउन पाउँदा संसार जितेको महसुस गर्छिन् ।
अजित क्षेत्री | गाउँघर दशैंको आगमनले उल्लसित छ । घरहरू रंग पोतेर उज्याला र चम्किला पारिएका छन् । आँगन, गल्ली, बाटो र डहर चिरिच्याट्ट पारी दुलही झैं सिंगारिएको छ । बडादशैं मान्न घर जाने र आउनेहरुले गाडी भरिन थालेका छन् । जुवाका बादशाहहरु तासको खाल जमाइसकेका छन् । पसलेहरु आधा बाटो/सडकै कब्जा गरी दशैका सामान बिक्रीका लागी प्रदर्शन गरेका छन् । बच्चाहरु लठ्ठे पिङ मच्चाउनमा मस्त छन् । बास्तवमा सारा देश नै भाङ् खाएर लठ्ठिए झैं बडादशैंको उल्लासमा लठ्ठिएको छ ।
हिजैदेखी देशभरका सरकारी र सार्वजनिक बिधालयहरु दशैं बिदा भएर बन्द छन् । घरपाइबाट टाढा रहेका शिक्षक बिधार्थीहरु धमाधम घर फर्किँदै छन् । गाउँमा पिङ् हाल्ने र बाटोघाटो सफा बनाउने चटारो छ । देशभरी जस्तै स्याङ्जा कोल्माको एक बिधालय पनि दशैं बिदामा बन्द छ भने गाउँलाई दशैंको आगमनले घपक्कै ढाकेको छ । सोही बिधालयका एक शिक्षक हुन् चोलाकान्त शर्मा । नामले भन्दा पनि मास्टर जी र मास्टर उपनामले चिनिन्छन् उनी । बुढापाकाहरुले उनको अनुपस्थितिमा उनलाई मास्टर भनेर सम्बोधन गर्छन् । मृदुभाषी एवम् गाउँलेको दुखमा सधैं दिलोज्यान दिएर सहयोग गर्ने हुनाले गाउँदेखी सदरमुकामसम्म उनको राम्रै इज्जत छ । सदरमुकाम पुतलीबजारको बाडखोला घुम्ती भनिने चोकदेखी कोल्मा काहुले सम्म जीप गुड्ने बाटो बन्नुमा यिनै मास्टरले गरेको सामाजिक अगुवाइ नै मुख्य कारण हो भन्छन् गाउँलेहरु । हल्का चेक सर्ट, कटराईजको पाइन्ट, गोल्ड स्टार जुत्ता र ढाका टोपी यिनको पहिरन र पहिचान हुन् । सदरमुकाम झर्दा होस् या अन्त जाँदा होस्, हातमा ठुलो अफिसिएल ब्याग र ब्याग भित्र एकजोर कपडा प्राय: छुट्दैन । मास्टर पनि दशैँको आगमनले फुरुक्क छन् । अरूको घरमा जस्तै उनको घरमा पनि दशैंको चटारो छ । भोली बिहानै सदरमुकाम गएर दशैंको खरिदारी र लत्ताकपडा किन्ने योजना बनाउँदै मास्टर र उनको परिवार निदाउँछ ।
बिहानको खाना घरमै खाएर मास्टर जीप चढेर मास्टर सदरमुकाम जान्छन् । सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा उनले दिनभरमा खरिदारी सिद्याउँछन् भने बिभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेका शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउँछन् ।
दिनभर यताउति गर्दागर्दै झम्के साँझ परिहाल्यो । लौ मार्यो गाउँतिर जाने सबै जीपहरु पहिले नै छुटिसकेछन् । जीप पार्किङ्मा एउटै जीप नभएपछि मास्टर अब डेढ घण्टा उकालो जंगलको बाटो हिनेरै घर पुग्नु पर्ने भो । छिटो छिटो औषधी पसलबाट आमालाई दमको नियमित औषधी आगामी पन्ध्र दिनलाई पुग्ने गरी किन्छन् र झोलामा राख्छन् अनि झोलाबाट दुई बेट्रीवाला टर्च लाइट निकालेर बाल्छन् । धिपधिपे उज्यालो दिंदै टर्च मास्टर साबको सन्ध्याकालीन सेवामा तम्तयार भो । मास्टरले पाइला चाले ।
उनले आज ठुली छोरीलाई जिन्सको पाइन्ट र टिसर्ट किनि दिएका छन् दशैंको दस्तुर । छोरालाई पनि जिन्स पाइन्ट र कलर भएको टिसर्ट अनि आफ्नी जीवनसंगीनी सरला अर्थात् मास्टर्नी साबको लागी पच्चीस सयको जापानीज सारी र बृद्ध आमालाई घरबुनाको धोती किनेका छन् । बँचेको पैसाले दसैँलाई केही मरमसाला किन्दा किन्दै पैसा सकियो, यसपाली उनको सोल च्यातिएको गोल्डस्टार जुत्ताले उनको खुट्टासंग सजिलै साथ छोड्न नपाउने भयो ।
घर जति चाँडो पुग्यो उति चाँडो आमाले दमको औषधी खान पाउने छिन् । उनले आमालाई आफ्नै हातले औषधी खुवाउने छन् । ७५ बर्षिया आमाको ब्यबहार आजकल केटाकेटीको जस्तो हुन थालेको महसुस उनले गरेका छन् । दुई बर्ष अघि पतिले परलोक यात्रा गरेपछि बुढि आमाको जीउने आधार र सहारा भन्नु नै यै मास्टर छोरा र बुहारी भएका छन् । साँझ छोरा घरमा भएन भने आमा अतासिन्छिन् र नानाभाँती बतुराउँछिन् । बच्चाले बाऊ खोजे झैं बुढिआमा छोरो खोज्छिन् साँझ परे सी । त्यसो त घर पुग्न ढिला भएको दिन छोरा छोरीको ध्यान र नजर बाटोतिरै दौडिरहेको हुन्छ । भञ्ज्याङ्तिर कसैले उज्यालो बालेर गाउँ तिर ठडियो भने घरका सबैले त्यो उज्यालो कता जान्छ भनेर ठमासी बस्छन् ।
मास्टरलाई जतिसक्दो चाँडो घर पुग्नु छ । भरे सदा झैं नौ बर्षिया छोरी र सात बर्षिय छोराले बाबुको थालबाट भात निकाली खाने छन् अनि बाबुको हातले भात खान उनीहरु खोसाखोस गर्नेछन् । त्यसो त कहिलेकाहीँ छोराछोरीले नदेख्ने गरी उनले आफ्नी मास्टर्नीलाई पनि एक गास खुवाउन भ्याउँछन् । त्यसो गर्दा उनलाई मास्टर्नी आफ्नी पत्नी नभएर प्रेमीका जस्ती लाग्छिन् । मास्ट्नीलाई पनि श्रीमानको जुठो हात आफ्नो ओठ हुँदै पुन श्रीमानको ओठसम्म पुगेको दृश्य संसारकै सुन्दर र अलौकीक दृश्य लाग्दछन् । राती बिस्तरामा बाबुको दुबै हातको सिरानी नहाली दुबै छोराछोरी निदाउँदैनन् । दिनभर कामले थाकेकी मास्टर्नी पनि हिउँदको यो सालीन मौसममा आफ्ना पतिको छातीमा हात राखी निदाउन पाउँदा संसार जितेको महसुस गर्छिन् । अझ धेरैजसो रातहरुमा त निदाएका छोराछोरी बाबुको काखबाट अर्को बिस्तरामा सारेर सुताइन्छन् र उनको पुरै बिस्तरा र शरिरमाथी मास्टर्नीले अधिकार जमाइसकेकी हुन्छिन् । हुन पनि बच्चाहरू हुर्किन थालेपछि पत्नीले बढि नै आफुलाई माया गर्न थालेको र आफ्नो सामित्यताको लागी भोकाएरै बस्ने गरेको उनले महसुस गर्न थालेका छन् । भोको बाघले शिकार झम्टे झैं हिंजो रात उनले झम्टेर आफुलाई एकै गास पारेको सम्झँदा उनी तरंगीत हुन्छन् ।
बाडखोला र स्याङ्जा बजारमा घटस्थापनाको दिनदेखि नै जुवाडेहरु म्यारिज खेल्नमा र कौरा हान्नमा मस्त छन् । गल्लीका भित्री घरहरूमा पुलिस प्रसासनको आँखा छलेर जुवा खेलाईएका छन् । कोही हारेका छन् कोही जितेका । जुवाडेहरुलाई कुखुराका साँप्रा, काँक्राको सलाद र बियर ठाउँको ठाउँ सर्भिस दिइएको छ । चार दिन लगातार खेल्दा पनि जीतबहादुर र रिते कार्कीले एक दाउ जित्न सकेनन् । श्रीमतीको बेरुवा औंठी एक छिन लगाउँछु भनेर ल्याएको जीतबहादुरले त्यो पनि फालेको छ । खेलको नशाले लठ्याएको छ तर साथमा सुको पैसो छैन । तासको खेल छोडेर जीतबहादुर र रीते चोकतिर निस्कन्छन् ।
दसैँको बेला भएकाले लाहुरेहरु र बिदेशीएकाहरु धमाधम गाउँ फर्केका छन् । देशमै भएकाहरु पनि दशैंको बोनस र मासिक तलब जेबमा राखी धमाधम घरतिर हिडेका देखिन्छन् । कोही पेन्सन थापी किनमेल गरी घर फर्केका छन् । मान्छेको चापलाई गाउँका जीपले थेग्न सक्दैनन् । त्यसैले मानिसहरू पैदलै पनि हिंडिरहेछन् कोही समुहमा कोही एक्लै आफ्नै सुरमा । जुवामा हारेका जीतबहादुर र रीते कार्कीको मनमा कुबिचारले स्थान ग्रहण गर्छ, दशैंमा घर फर्केकालाई लुट्ने र पैसा कमाउने । गत बर्ष यै समयमा यिनिहरूले तीन ठाउँमा लुटी करिब सवा लाख पचाएका थिए । लुटेराको सुईंको सम्म कसैले पाएनन् । यो जोडीले आज लुट्न योजना बनायो । सकेसम्म लुट्ने मात्र तर लुटिनेले आँफुहरुलाई चिनेको अवस्थामा मारिदिने योजना बन्छ ।
झिमिक्कै साँझ परिसकेको छ । एक काँधमा ब्याग र हातमा टर्च लाईट अनि अर्को हातमा सामानले भरिएको पोलिथिन ब्याग लिएर मास्टर देबिथान हुँदै अरौंदी गाउँतिरको बाटोमा लम्किरहेछन् । बाटोको माथीतिर घना जंगल र तलतिर लहलहाउँदा धानका बाला छातीमा टाँसेर अरौंदी खोलाको फाँट मुस्कुराई रहेछ । अलितल सानो अरौंदी खोला एकतमासले सुसाई रहेकोछ । झ्याउँकिरी र भ्यागुताको टर्रटर्र आवाज कानमा गुन्जिरहन्छ । "यो दशैंमा म आइन भनेँ..निष्ठुरीलाई दाई तिम्ले नभने" दिउँसो रेडियोमा सुनेको यो गीत गुनगुनाउँदै मास्टर अगाडि बढिरहेछन् । बाटो निस्पट्ट अँध्यारो छ चुक पोखेजस्तो । पहाडको खोंच र कुइनेटो परेकाले यहाँ आइपुग्दा रातको समयमा मान्छे डराउँछन् ।
जीत बहादुर र रिते कार्की यसै कुइनेटोमा बटुवा लुट्न ढुकी बसेका छन् । काँधमा र हातमा गह्रौं सामान बोक्दै एक मानिस टर्च लाइट बालेर आफ्नै नजिक आएपछि जीतबहादुर र तिते हौसिन्छन् । मास्टर नजिकै आइपुगेका छन् । एक्कासी रिते मास्टरमाथी जाई लाग्छ र हातको टर्च खोसेर खेततिर मिल्काई दिन्छ । उसैमौकामा जीत बहादुरले मास्टरको ब्याग खोस्छ । "ओई को हौ तिमीहरु ? के गरेको यो ?"- घबराउँदै मास्टरले भने ।
" हामी चोर" एउटाले भन्यो ।
"चुपचाप सबै सामान हामीलाई दे"-अर्कोले भन्यो ।
"सबै खोसी सकिस् अब के दिउँ ?
"कति पैसा छ निकाल !"-चोरले फेरी भन्यो
"छैन पैसा सैसा, खोई मेरो ब्याग दे ?" मास्टरले रिस, आक्रोश र डर मिसाउँदै भनेसः "बढ्ता बोल्छस् ?, ल खा...." रीतेले कम्मरको खुकुरी मास्टरको टाउकोमा बजार्छ । ढुनमुनिंदै मास्टर खेतमा लड्न पुग्छन् । रगतको छर्रा रिते र जीत बहादुरको मुखभरी पर्छ । छटपटाएका मास्टरको मुखभरी खेतको पानी जान्छ र बिस्तारै उनी चलमलाउन बन्द गर्छन् । चोरले उनको शरीर छामछुम गरेर झोला बोकेर जंगलतिर भागीसकेका छन् । झ्याउँकिरी र भ्यागुता कराउन बन्द गरे । उता खाना पकाएर पतिको पर्खाईमा बसेकी मास्टर्नीको छाती अचानक भारी भएर आयो । बाहिर निस्कन्छु भन्दा ढोकामा ठोक्कीएर हातको एउटा चुरा फुट्यो, छोराको टाउकाको टोपी खस्यो ।
"भगवान्, के अलल्छिन हो यस्तो !!" मास्टर्नी डरले चिच्याईन् । खोरमा थुनी राखेका कुखरा तर्से, बसिराखेको भैँसी जुरुक्क उठ्यो ।
"उफ्, कस्तो नराम्रो सपना देखेछु, बुढी एक गिलास पानी लेऊ त"-उठ्नासाथ मास्टरले भने । "छि, हजुर पनि ! चाडबाडको बेला के के सपना देख्नुहुन्छ ।"- एक गिलास पानी पतिको अगाडि राख्दै मास्टर्नीले भनिन्-"बिहानपख देखेको सपना पुग्छ भन्छन् ।"
'के गरम त नि, मैले देख्छु भनेर देखेको होइन के रे'-मास्टरको ओंठे जवाफ फर्कन्छ ।
''ल भै गो, पानी पिउनुस्, त्यो सपना शौचालय बस्दा आँफैलाई सुनाउनु, दोष काटिन्छ रे" यति भनि मास्टर्नी गोठतिर लागिन् । मास्टर पानी पिईसकेर शौच जान्छन् अनि आफ्नो सपना सुनाउन थाल्छन् आफैलाई । हुन पनि यति नराम्रो सपना उनले कहिल्यै देखेका थिएनन्, आँफै मारिएको सपना ।
उज्यालो भएको छ, भर्खरै उदाएको घाममा चाँदिको घेरो सरी बादलले हल्का छोपेको छ । तल फाँटतिरबाट निस्केका हुस्सु आकाश छुन दौडेका छन् । हल्का चिसो मौसम छ । घरमा चिया पाकिसकेको छ मास्टर्नीले पति, बच्चा र सासुलाई चिया दिन्छिन् र आँफू पनि पिउँछिन् ।
"यसो रेडियो खोलओ न केटाकेटी हो, चाडबाडको बेला छ, के के भन्छ रेडियोले''- यति भन्दै बार्दलीमा बसेकी मास्टरकी बुढी आमैले खोक्न थालिन् ।
"दशैं सकिनासाथ आमालाई पोखरा लगेर ठुलै हस्पतालमा चेक गराउँछु" यति भन्दै उनी भित्ताको किलामा झुँडाई राखेको रेडियो रेडियो खोल्छन् । रेडियोमा प्रबिण गिरीले बिहानको समाचार पढिरहेका छन् । "कति चाँडै सात बजेछ है !" मास्टर मनमनै गुनगुनाउँछन् ।
"स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिकाको उत्तरपूर्वमा पर्ने देविस्थान् र अरौंदी गाउँको बिचको जंगलको बाटोमा गएराती अज्ञात ब्यक्तिहरुबाट कोल्मा काहुले गाबिसका एक बिधालयका प्रधान अध्यापकको धारीलो हतियार प्रहार गरि हत्या भएको छ....." प्रबिण गिरी समाचार बाचन गरिरहेछन् । समाचार सुनेर मास्टरको हातबाट चियाको गिलास भुईंमा खस्छ ।
"यै सपना हो मैले देखेको" एक्कासी मास्टर चिच्याउँछन् । "थुईया,,,ति पापीको घरमा आगो लागोस्, कस्तरी चाडको बेला अर्काको ज्यान लिईछस् पापी"- बार्दलीबाट मास्टरकी आमा रेडियोको समाचारको तितो प्रतिक्रिया स्वरुप हत्यारालाई गाली दिँदै थिईन् । 'साह्रै अनर्थ भएछ भगबान् '- मास्टर्नीले लामो सुस्केरा हाल्दै भनिन् । आँफूले केही घण्टा अगाडि देखेको सपनासँग ठ्याक्कै मेल खाने सपना...केवल पात्र फरक! जिऊ लगलग काम्छ,शरीर असिनपसिन हुन्छ । 'बिहानी पखको सपना पुग्छ भन्छन् भन्दैथी बुढी, हो त रै'छ'-उनी मनमनै गुनगुनाउँछन् । 'बच्चाले जस्तै चिया पोखेर के गरेको होला' भन्दै मास्टर्नी मास्टरले चिया पोखेको भुईं सफा गर्न लाग्छिन् । केटाकेटीले रेडियोको समाचारमा ध्यान दिएनन् आफ्नै सुरमा चिया पिउँदै छन् । मास्टर जुरुक्क उठ्छन् अनि रेडियो बन्द गर्छन् । कुर्चीमा थचक्क बस्छन् अनि श्रीमतीतिर हेर्दै भन्छन्- बुढी यो सपना भन्नी कुरो कसरी देखिन्छ होला? के राती मेरो आत्मा त्यहाँ गएको थियो र त्यो घटना प्रत्यक्ष देखेको थियो होला त ?"
मास्टर्नी एकोहोरो टोलाए जस्ती हुन्छिन् केही जवाफ दिन्नन् ।
एकैछिन् पछि उनी भन्छिन्: "छिमेकाँ यस्तो नराम्रो घटना घटेसी चाडबाड आएको के सार भो र? अब सदरमुकाम क्यार्न जानु पर्यो र बरू गए हुन्छ हेडसरको घरतिर,..रुवाबासी होला कठै !"
"गैहाल्छु अब, छिमेक मर्दा पर्दा त हो नि चाहिने"-लामो सुस्केरा हाल्दै मास्टर भन्छन्-" यस्तो मृत्यु त कस्तै सत्रुको पनि नहोस् ।"
"नमस्कार मास्टर साप, गाउँमा त साह्रै नराम्रो घटना घटेछ है ! राम राम राम.." कोही मान्छे यति भन्दै उनको आँगनतिर आउँदैछ । उही जीतबहादुर रै'छ जसले सपनामा उनको हत्या गरेको थियो । मास्टर झस्के ।
"गुन्द्री तानेर बस"-मास्टर्नी बोलिन् । मास्टर भित्र पसे । प्यास लागेजस्तो भयो । एक अंखोरा पानी घटघटी पिएर सिध्याए ।